I-Adhesive Foam Tape
Iyini intengo ejwayelekile yokushintshwa kwengcindezi? Abakhiqizi bokushintsha ingcindezi baseChangzhou ukukusiza uqonde ngokuphelele!
Kunezinto eziningi ezimpilweni zethu ezidinga ukulinganiswa kwengcindezi, njengamakhemikhali, imishini, ama-hydraulic kanye ne-hydroelectric izicelo ezidinga ukuqashwa kwesikhathi sangempela kwengcindezi yazo, kepha lapho amanani wengcindezi ephezulu kakhulu amadivayisi wokulinganisa ingcindezi d ...
Uyini umehluko phakathi kwe-glass fiber aluminium foil tape ne-aluminium foil tape?
A. Uyini umehluko phakathi kwe-glass fiber aluminium foil tape ne-aluminium foil tape? Ingilazi yefayibha ye-fiber aluminium tape indwangu, kusetshenziswa inqubo eyingqayizivele esezingeni eliphakeme, i ...
I-aluminium tape tape - iteyipu yomlingo engakwazi “ukundiza” iye esibhakabhakeni
Umgibeli wangaphandle wethukile lapho ethola ukuthi abasebenzi bezokulungisa isikhumulo sezindiza babethebe isikebhe senjini ngaphambi kokuba ibhanoyi lisuke. Isigcawu sithwetshulwe futhi safakwa ku-intanethi, siphakamisa ukukhathazeka nemibuzo mayelana nemiphumela yezokuphepha yokusebenzisa ithephu ukulungisa i-airfram ...
I-Egret MOPP Tape.
I-Egret Tape, eyasungulwa ngo-1997 edolobheni laseChangzhou, esifundazweni saseJiangsu, ihlanganisa indawo engamamitha ayi-13,000 alinganayo, enendawo yokwakha ephelele engama-square metres ayi-20,000. Imikhiqizo yethu eyinhloko yokunamathisela ingahlukaniswa ngezigaba ezimbili ezibanzi. Eyokuqala ingcina yeteyipu yokunamathela: i-aluminium foil tape, PE ...
Indima yetape yesipanji ye-EPDM emikhiqizweni yesiponji engamelana nokushisa namasu wokusebenzisa
Injoloba ye-Butyl inokungena okuphelele kwegesi nokumelana nokushisa, futhi isetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni imikhiqizo enjoloba emelana nokushisa okuhlukahlukene, imikhiqizo enjoloba yesiponji emelana nokushisa ingenye yazo. Abakhiqizi abaningi bokucubungula amashubhu bangaphakathi bayazi ukuthi ngaphakathi butyl ...
Amateyipu we-aluminium foil ongakaze uwasebenzise
Uma kukhulunywa nge-aluminium foil tape, ngikholwa ukuthi sonke kufanele siyijwayele, njengoba kungabonakala kakhulu esigabeni sezinto zasendlini. Okokuqala, i-aluminium foil tape yenziwe nge-adhesive enhle ezwela ingcindezi, kanye nezici ze-aluminium foil ephezulu ...
Ithini itheyiphu yegwebu?
Amateyipu amagwebu asetshenziselwa ukuncipha komsindo, ukuvikela, ukuvala izigaxa, ukugoqa / ukugoqa, nokufaka uphawu futhi enzelwe ukuthuthukisa ukubukeka nokwenza ngcono ukusebenza kukonke komklamo womkhiqizo wakho. Iteyipu ngayinye yegwebu inezici ezihlukile nezinhloso ezinhle. Amanye ala mateyipu ayatholakala nge-vari ...
Yini ukusetshenziswa kwe-aluminium tape
Okokuqala, iteyipu ye-aluminium yenziwe nge-adhesive esezingeni eliphakeme enezingcindezi. Ngaphezu kwalokho, ucwecwe lwe-aluminium lunezici zokumelana nokushisa okuphezulu nokungena komoya, ngakho-ke inomphumela omuhle wokulondolozwa kokushisa nezimpawu ezibonakalisayo, ezingasetshenziswa empilweni yethu ...